Afaka hitarika ahy amin'ny SEO ho lisitra Amazon ve ianao?
Tsy misy mpitaingina, fa ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanatsarana ny varotra amin'ny Amazon dia manana vokatra avo lenta any. Ary mihazakazaka SEO amin'ny lisitra Amazonanao dia afaka manatsara bebe kokoa ny toerana misy ny laharam-pikarakaranao, ka hitondra anao ho eo anoloan'ny tarika mpihazakazan'ireo mpanjifa mbola tsy voavolavola. Fa ahoana no ahafahan'izy ireo manova azy ireo amin'ny tena mpividy? Eny, andeha hojerentsika. Ity misy torolalana SEO fandefasana horonantsary amazonin'i Amazon ho eny an-tampon'ny fikarohana an-tserasera sy ny fijerena tsara kokoa ny mpijery malalaka kokoa ny mpividy. Raha heverina fa miovaova foana ny algorithm amin'ny alàlan'ny A9 any Amazonia, eto ambany dia hanomboka hamantatra ny ankamaroan'ny teny manan-danja azonao aho - raha te hanana toerana fanombohana mafonja amin'ny fanentanana fanentanana mitohy ianao.
Taorian'izay, mety mbola misoroka hatrany amin'ireo hetsika manaraka ireo izay voatazona ao an-tsainao momba ny fanontana manaraka. Midika izany fa rehefa avy manao fikarohana feno fikarohana ianao, dia asaina manohy manolotra fihenam-bidy, manome fahafaham-po amin'ny mpanjifa kokoa amin'ny mpanjifa, manatsara ny taham-pitenenana sy ny fotoana laniana amin'ny pejy, amin'ny fampiasana dokam-barotra sponsored, ary koa ny fandresena ny Amazon amin'ny fividianana vidin'entana tsena.
Fantaro ny fototry ny fandresena
Ny mety ho fanatsarana ny keyword dia mety ho ampahany lehibe amin'ny famoahana SEO mahomby ho an'ny lisitry Amazon. Ary ny zava-misy dia tsy hafa amin'ny karazam-pikarohana lehibe hafa tahaka an'i Google mihitsy, ary koa Yahoo, Bing, sy ny sisa. Tadidio fa ny tanjonao voalohany dia ny hahazoana antoka fa ny tolotra vokatrao dia sokajiana tsara ho toy ny teny fanalahidy maro sy fifandimbiasana fitadiavana fohy araka izay azo atao. Noho izany, mba hametrahana azy ireo amin'ny isa maromaro indrindra amin'ny fikarohana, dia manoro hevitra aho amin'ny fampiasana iray amin'ireo fitaovana rindrambaiko sy rindrambaiko an-tserasera manokana mifandraika amin'ny tetikady SEO tsara indrindra amin'ny lisitry Amazon izay tena mivarotra:
Sonar - dia fitaovana fikarohana maimaimpoana maimaim-poana Amazonie izay mampiseho ny lafiny matanjaka indrindra rehefa tonga amin'ny famantarana ireo teny manan-danja rehetra izay mahaliana ny vokatra amidy, ary ny fikarakarana ny lisitry ny fikarohana malaza indrindra ireo fangatahana ampiasain'ireo mpivarotra mivantana amin'ny Amazon. Ampidiro tsotra ny tenimiafina kinendry misy anao - ary mahazo fahitana mahasarika fifaninanana, miaraka amin'ny soso-kevitra azo ampiharina aminao mba hifehezana ny tsenan'ny orinasa na ny sokajinao.
LSI Graph - dia fitaovana maimaim-poana iray hafa, izay tena mahasoa rehefa manitsy haingana sy mora atao ny mamorona teny manan-danja lehibe indrindra amin'ny foto-kevitrao.
Sellics - dia nomena torohevitra ho an'ny ambaratonga voalohany amin'ny fikarohana momba ny teny fototra amin'ny Amazon. Midika ve izany fa tokony hiezaka kokoa ianao amin'ny voalohany sy amin'ny ankapobeny rehefa mila manao fikarohana momba ny teny fikarohana momba ny fikarohana ianao ao amin'ny lisitra SEO sy Amazon.
Thesaurus - Ity mpanampy an-tserasera ity dia mety ho iray amin'ireo ambany indrindra amin'ny fanadihadiana lalindalina kokoa amin'ny fikarohana lalindalina sy ny SEO fanatsarana ny lisitry ny vokatra amin'ny Amazon. Andramo fotsiny izany mba hahazoana soso-kevitra vitsivitsy fanampiny amin'ny teny Anglisy anglisy, ary fantaro fotsiny ireo anarana hafa tsy ampiasaina tsy mbola ampiasaina izay mbola tolo-kevitra tokony hampidirina ao amin'ny fampielezan-kevitra mitohy amin'ny SEO ho an'ny lisitry ny vokatra ao Amazon Source .